Al Shabaab Oo Sheegtay In 26 Askari Ay Ku Dileen Weerar Ka Dhacay Gobolka Jubbada Hoose – Hornafrik Media Network
Al Shabaab Oo Sheegtay In 26 Askari Ay Ku Dileen Weerar Ka Dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Warar dheraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay Weerar Xarakada Al Shabaab ay ku qaadeen saldhig Ciidamada Maamulka Jubaland ay ku leeyihiin Duleedka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Weerarkan oo mas’uuliyadiisa ay sheegteen Xarakada Al Shabaab ayaa lagu beegsaday Saldhiga Ciidamada Jubaland ee DeEgaanka Buulo Gaduud oo qiyaas ahaan 35 KM dhanka waqooyi uga beegan Magaalada Kismaayo.
Afhayeenka dhanka howlgallada ee Xarakada Al Shabaab, Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlay Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa waxuu sheegay in Weerarkaasi ay ku dileen ugu yaraan 26 Askari.
Abuu Muscab ayaa waxuu tilmaamay in labo Gaari oo nuuca dagaalka ay halkaasi ku gubeen, islamarkaana ay hub kala wareegeen Ciidamada Maamulka Jubaland intii uu socday weerarkaasi.
Wakaalada Wararka ee Reuters oo soo xiganeysa Sarkaal ka tirsan Ciidamada Maamulka Jubaland ayaa sheegtay in Weerarka uu jiro, balse uu ka gaabsaday sarkaalkaasi in uu ka hadlo khasaaraha ka dhashay.
Saldhiga weerarkan lagu qaaday ayaa si wadajir ah waxaa uga howlgalla Ciidamada Maamulka Jubaland iyo kuwa Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida lagu daabacay wakaalada wararka ee Reuters.
Ilaa iyo hada majiro war rasmi ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo kuwa Maamulka Jubaland oo ku aadan Weerarkii ay sheegteen Al Shabaab ee lagu qaaday Ciidamada huwanta ee DeEgaanka Buulo-Gaduud ee Duleedka Magalada Kismaayo.
Xafiisyadda Dowladda Somalia oo ku mashquulsan cidda dusha laga saari lahaa Fadeexadii Qalbidhagax.